पावरफुल नेताहरु भएपनि संघीय बजेटमा दाङमा उपेक्षीत भयो(सम्पादकीय) – जागरण अनलाइन
२०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १३:०८ मा प्रकाशित
विगत भन्दा अहिले फरक के भयो भन्ने कुरापनि छलफलका विषयबस्तुहरु बनिरहेका छन् । एकथरीले दाङमा गौरवको आयोजना परेन् भनेर विश्लेषण गरीरहेका छन् भने अर्को थरीले रातो कितावमा पर्ने नियमीत बजेट हामिहरुले नै ल्याएको हो भनेर प्रचार गरीरहेका छन् । दाङमा वामपन्थि शक्तिले विजय हासिल गरेपछि केही नयाँ कुरा दाङले पाँउछ भन्ने अपेक्षा दङ्गालि जनताको थियो । झन्डै मुलुकले जनप्रतिनिधि पाएको दुई वर्ष हुनै लाग्यो । संघीय बजेटलाई हेर्दा अघिल्लो बजेटले आत्मसात गरेका कुराहरु पनि अलिवढि फोकस दिएर ल्याउन नसकेको सत्य कुरा हो । दाङको नारायणपुरमा बनाउने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखी, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट, दाङका निर्माणाधिन सडक, पुल पुलेसाका सन्दर्भमा नितिगत निर्णय गरेर विकासको गति छिटो भन्दा छिटो सञ्चार होस भन्ने दङ्गालिको अपेक्षा हो ।
सभामुख र मुख्यमन्त्रिवाट जनताले बढि कुरा अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ । निर्वाचनकाक्रममा धेरै कुराहरु सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा यसलाई कुरामा भन्दा ब्यवहारमै उत्तार्नुपर्ने जरुरी छ । दाङको मुहार फेर्ने कुराहरुमा एउटा प्रदेश राजधानि दाङ बनाउने कुरा पनि अत्याधिक महत्वपुर्ण एजेण्डा थियो । यद्यपि, काग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो वेला बुटवल अस्थामि मुकाम तोक्यो । काग्रेसकै नेताहरुले काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायि राजधानि बनाउनु नै गलत भएको भन्ने दृष्टिकोणवाट टिप्पणि हुन थालेका छन् । यद्यपि, केही समय अगाडि देउवा लमही आउदा आफै नै पुर्वाधार अभाव भएकै कारण अस्थायि राजधानि बुटवल बनाएको सार्वजनिकरुपमा वोलि सकेका छन् । यो अभिब्यक्तिलाई लिएर विरोधका स्वरहरुपनि सुनियो । समग्रमा भन्नुपर्दा काग्रेसले बुटवल अस्थायि राजधानि तोक्नु त्यो सरासर गलत हो भने त्यही कुरालाई कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई सरकार भइरहेको वेला भजाएर काग्रेसमाथि सम्पुर्ण दोष थुपार्दै कम्युनिष्टले यसवाट ओभानो हुन बन्दैन् । काग्रेसले सही निर्णय नगरेको भन्दै दाङलाई आठौ प्रदेश बनाएर भएपनि प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने कुरा सभामुख कृष्णबहादुर महरावाट अभिब्यक्ती आएकै हो । काग्रेस र तत्कालिन नेकपा माओवादि सरकारमै रहेपनि माओवादिवाट मन्त्रि बनेकाहरुले राजिनामा दिएर सोही सरकारमा सामेल थिए । देउवाले तत्कालिन समयमा महराको पनी कुरा नसुनि आफु अनुकुल निर्णय गरे । त्यतिमात्रै हैन, दाङको विकासका लागि मरीमेटेका स्व. खुमबहादुर खड्का पनि सोही समयमा विरामि पर्नु र निधन हुनु पनि दाङले ठुलो क्षति वेहोर्नुपर्यो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रि शंकर पोख्रेल पनि काग्रेसले अस्थायि दाङ तोके स्थायि गराउने आफुहरुको जिम्मेवारी भएको चुनाव जितिसकेपछि अभिब्यक्ति वाहीर आएको थियो । मुख्यमन्त्रि पोख्रेल आफै पनि राजधानि दाङलाई बनाउने कुरामा कुटनितिक पहल जारी राखेको देखीन्छ । यसमा उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न त्यो भविष्यले देखाउला । दङ्गालिले दाङको मुहार फेर्ने गरी दाङले धेरै भन्दा धेरै बजेट अपेक्षा गरेकोलाई धेरै ठुलो नकारात्मकरुपमा लिन भने हुँदैन् । स्वाभाविकरुपमा दङ्गालिले चुनावको वेला केही अपेक्षा गरेर भोट हाले । त्यो भोटलाई निराशा नभई आशामा वदल्नुपर्छ । विगतप्रति जुन तरीकाले प्रसंसा गर्ने वाटो बनेको छ, अव त्यो विगतप्रतिको प्रसंसा वर्तमानमा केन्द्रिकृत गर्न जरुरी छ । दाङमा ठुलो बजेट नपरेको सत्य हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले यसमा बजेट आयो भने स्वाभाविकरुपमा वर्तमान नेतृत्वले नै ल्याएको जनताले बुझ्छन् । प्रतिष्ठानलाई राजनितिक अखडा बनाएर बजेट नदिनु भनेको हात वाधेर काम गर भनेजस्तै हो । वरु बजेट विनियोजन अनुसार काम भए नभएको स्थानिय जनप्रतिनिधि र केन्द्रिय जनप्रतिनिधीहरुले मुल्याङ्कन र निरीक्षण हुन जरुरी छ । अर्को कुरा दाङमा बन्ने भनिएको बैकल्पीक विमानस्थलको काम पनि जनताले देखीने गरी अघि बढाउन आवश्यक छ । जनताले महसुस हुने गरी काम भयो भने आफै प्रचार गर्न थालिहाल्छन् । त्यो महसुस वर्तमान नेतृत्ववाट गराउन जरुरी छ । यद्यपि, विगतमा धेरैपटक उठ्दै आएको माडि डाइभर्सन र तुलसिपुर विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने कुराहरु बजेटमा आएका छन्. । कम्तिमा पाँच वर्षको अवधिमा यो चिज भयो र दङ्गालिका लागि गर्व गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । विगतमा नियमीत कामप्रति अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले गौरव गर्दै त्यसलाई मात दिने गरी काम गर्नुनै बुद्धिमतापुर्ण निर्णय हुन जान्छ ।
सत्तारुढ दलहरुले यसकारण एकल्याइरहेका छन् राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई(सम्पादकीय) २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १३:०८
कसका कारण राजधानी हुन सकेन दाङ, किन आरोप प्रत्यरोप २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १३:०८
कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस् २०७६ जेष्ठ २८, मंगलवार १३:०८